मधेस केन्द्रित दलले किन निर्वाचनमा भाग लिने ? | रेडियो फूलवारी १०५.४ मेघाहर्ज
Home विचार/ब्लग मधेस केन्द्रित दलले किन निर्वाचनमा भाग लिने ?
: May 31, 2017 : विचार/ब्लगNo Comments
दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन अघि संविधानको संसोेधन गर्नुपर्ने माग राख्ने मधेसकेन्द्रित दलहरु मध्ये केही निर्वाचनमा जाने भएका छन् । तर ६ पार्टीहरु आपसमा मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले अहिले पनि निर्वाचनमा भाग लिने हो या होइन टुंगो छैन । तर, मधेसका मतदाता स्थानीय तहको निर्वाचनको व्यग्र प्रतिक्षा
गरिरहेका छन् । उपेन्द्र यादव र विजयकुमार गच्छदारले नेतृत्व गरेको मधेस केन्द्रित पार्टीहरुले निर्वाचनलाई आन्दोलन कै रुपमा उपयोग गर्ने कुरा उठाएको छ । दुबै पार्टी महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसंग तालमेल गरेर निर्वाचनमा जान चाहिरहेको छ । यसले मधेसमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई अझै अन्यौलता तर्फ धकेलिएको विचार बौद्धिक बर्गमा गरिदैछ ।
६ बटा मधेस केन्द्रित दलको पार्टी एकीकरणले दिएको सकारात्मक सन्देशले कार्यकर्ता दीर्घामा मात्र नभई मतदातामा पनि उत्साह थपिएको थियो । कार्यकर्ता र मतदातामा थपिएको उत्साहलाई सार्थक वा परिणाममूखी बनाउन के गर्नु पर्छ भनिरहनु पर्ने कुरा होइन ।
मधेससँग लचिलो भएर राजनैतिक मुलधारमा ल्याउनु पर्दछ भन्ने काँग्रेसको अडान छ । एमाले ठीक विपरित भएकोले संसदमा पेश भएको संसोधन विधेयक थन्किएको छ । एमालेले नचाहेसम्म संविधानमा संसोधन हुन्न । यसलाई बुझ्न नसके एमालेको रिसले आफ्नै भोटबैंकसंग सम्पर्क टुटाउने काम गर्नु हुन्न । मधेसीदलहरुले एउटा निश्चित लक्ष्य राखेका छन् । त्यस लक्ष्यको प्राप्ती निकट भविष्यमा हुन वा नहुन सक्छ । जुन लक्ष्य राखेको छ के यो चुनावको वहिष्कारले त्यो पुरा हुन्छ ? स्थानीय निर्वाचन मात्र होइन, यस्तै हो भने प्रादेशिक र केन्द्रिय निर्वाचन पनि बहिष्कार गर्नु पर्दाको हालत के हुन्छ ?
नेपाली कांग्रेसले पञ्चायत कालमा स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवार उठाएको थियो । २०४७ सालमा प्रजातन्त्रको बहाली हुँदा तत्कालीन एमाले पार्टीले थुप्रै विरुद्धका स्वरहरु राखेर त्यस संविधानलाई समर्थन गरेको थियो । तर त्यति हुँदा पनि क्रान्तिलाई भविष्यमा सम्पन्न गर्ने भनेर निर्वाचनमा भाग लिन चाहेको थियो । भारतीय स्वाधिनताका समय तमिल आन्दोलनका प्रमुख नेता हरुले भारतसँग छुट्टिने घोषणा गर्दागर्दै पनि उनीहरुले तमिलनाडुको प्रान्तीय चुनाबमा भाग लिएका थिए । लेलिनको समयका क्रान्तिकारीहरु सबै निर्वाचनको बहिष्कार गरी एकै पटक सत्ता कब्जा गर्न चाहन्थे । तर त्यसो गरेनन् । निर्वाचन बहिष्कार गर्नु आत्मघाती राजनीति हो । निर्वाचन आम जनताका दैनिक चासोसँग सरोकार राख्ने विषय हो भने सिद्धान्त राजनीति गर्ने माध्यम हो । मधेसी महन्थ ठाकुर जस्ता परिपक्व नेतालाई इशारा काफी छ ।
आन्दोलन गर्नेले निर्वाचनमा भाग लिनै पर्दछ भन्ने पनि छैन् । निर्वाचनमा भाग नलिंदा कुनै फरक पर्दैन । राजनीतिमा यस्तो भइरहन्छ । धेरै देशमा वा आफ्नै देशमा पनि कतिपय पार्टीहरुले विभिन्न समयमा भएका निर्वाचनहरुमा भाग लिएका छ्रैनन् । तर त्यो सन्दर्भ र अहिलेको सन्दर्भमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । यो विश्लेषण गर्ने काममा राष्ट्रिय जनता पार्टी स्वतन्त्र छ । तर यसको विश्लेषण गरेरै निष्कर्षमा पुगेका उपेन्द्र यादवको तर्कलाई पनि अमल गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ ।
एमालेको समर्थन नपाएसम्म संविधानमा संशोधन हुन सक्दैन । मधेस केन्द्रित दलको भावना बुझेर नेपाली कांग्रेस र माओवादीले चाहेर पनि अहिलेको संसदको अंकगणितिय जालोमा संविधान संशोसन गराउन सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा कि त एमालेको मधेसीमूलका सभासद्हरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्नु पर्दछ । कि त मधेसकेन्द्रित दलहरुले भविष्यमा जनलहर ल्याएर आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्नका लागि एक बर्ष भित्र गरिने केन्द्रिय र प्रादेशिक संसदको निर्वाचनमा राम्रो उपलब्धी हाँसिल गरेर उनीहरुको चाहना अनुसार संविधान संशोधनमा सहयोग पु¥याउनेको सहयोगमा दुई तिहाई पु¥याएर आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्नु पर्दछ ।
अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलले भाग नलिएमा कार्यकर्ताहरुले त आन्दोलन गर्लान तर आम मधेसी तटस्थ नागरिकहरु स्थानीय सामाजिक परिवेश अनुसार उठेका उम्मेदवारहरु मध्ये कसै न कसैलाई मत हाल्न जान बाध्य हुनेछन् । यसमा उनीहरुलाई राजनीति मुद्दा भन्दा समाजिक परिवेशले बाध्य बनाउने छ ।
यसले मधेस केन्द्रित दल र सर्वसाधारण मधेसबासीबीचको आत्मिए सम्बन्ध मनोवैज्ञानिक रुपमा कमजोर हुन्छ । जसको अवसर नयाँ डिजाइनरले प्राप्त गर्न सक्छ । त्यसपछि मधेस केन्द्रित दलहरुको लागि ‘बाबाजी के बेल हाते हाते गेल’ जस्तै हुन्छ उनीहरुको पुरानो जनमत । मधेस केन्द्रित दलको अडान अझ कस्सिएर गयो भने छुट्टै मधेस चाहनेहरुको पोल्टामा मधेसको राजनीति जानसक्ने सम्भावना छ । कि त मधेस केन्द्रित दलहरुले भित्री मनबाट मधेसलाई छुट्टै राज्य बनाउनु पर्दछ भन्ने भावना राखेर अघि बढी रहनु भएको हो भने अहिलेको उहाँहरुको कदम ठीक छ । यस्तै अवरोध गर्दै गए एकदिन मधेस छुट्टै राज्य बन्न सक्छ । तर त्यसमा तपाईहरुको नेतृत्व पनि हुँदैन र त्यसको श्रेय तपाईहरुलाई जाँदैनन् । त्यस अवधारणाको जन्म दाताहरु अरु नै छन् । तपाईहरु गोटी बन्न सक्नु हुन्छ ।
मधेस केन्द्रित दलले के गर्ने भनेर गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने वेला आएको छ । बरु, एक कदम पछाडी सरेर एकीकृत उम्मेदवारहरु उठाएर मधेस केन्द्रित दलहरुले स्थानीय निर्वाचनलाई पनि एउटा आन्दोलनको माध्यम बनाएर जनमत बुझ्ने कसीको रुपमा प्रयोग गरेमा मधेस केन्द्रित दलको भविष्य उज्जल हुन्छ ।
हो, मधेसी, जनजातिहरुले जति अधिकार पाउनु पर्ने हो त्यति अहिले पाइसकेका छैनन् । तर, यसो भनेर अहिले बनेको संविधान कार्यान्वयन हुन नदिनु भनेको प्राप्त संघीयतालाई तिलान्जली दिएर २०४७ सालको संविधानतर्फ नेपाल धकेल्ने वातावरण सृजना गरिदिनु जतिकै हो ।
सत्तामा एमाले, कांग्रेस र माओवादी भित्र सबै मधेसी र जनजाती विरोधी छैनन् । जो विरोधी होइनन् उनीहरुको सल्लाह र सुझाव पनि विश्लेषण गर्ने बानीको विकास मधेस र जनजाति केन्द्रित दलहरुले गर्नु पर्दछ । अहिले मधेसी र जनजातिले खोलेको पार्टीहरु एक अर्काबीच एकिकरण हुन सुरु भएको छ । मधेस केन्द्रित दलहरुबीचमा पनि एकिकरणको शुभ संकेतहरु देखिएको छ । तसर्थ मधेस केन्द्रित दल र जनजाति केन्द्रित दलहरुले स्थानीय निर्वाचनलाई आन्दोलनको एउटा स्वरुपको रुपमा स्वीकार गरेर जानु अहिलेको उत्तम उपाय हो ।